Amaphoyisa acela ukufuniswa osolelwa ukukhwabanisa | News24
Amaphoyisa acela ukufuniswa osolelwa ukukhwabanisa
Amaphoyisa acela ukufuniswa uMnuz Ahmed Omarjee, oneminyaka engu-33, osolelwa ukukhwabanisa amalungu omphakathi imali eyizigidi. Isithombe: Sithunyelwe
ITHIMBA labaseshi baKwaZulu-Natal likhiphe isithombe sika Mnuz Ahmed Omarjee, oneminyaka engu-33, osolelwa ukukhwabanisa amalungu omphakathi imali eyizigidi.
Okhulumela amaphoyisa esifundazwe, u-Lieutenant Nqobile Gwala uthe umsolwa uhlala e-Dolphin Crescent, e-Blythedale, KwaDukuza futhi uyafuneka njengoba esolelwa amacala okukhwabanisa.
Uthe: “Kusolwa ukuthi uMnuz Omarjee wakhwabanisa izisulu ukuthi zitshale imali ebhizinisini lakhe ngokuzikhohlisa ngokuthi uthole ithenda kwamasipala. Kusolwa ukuthi umsolwa wasebenzisa incwadi yakwamasipala engumkokotelo ukukhwabanisa izisulu. Abamangali batshala imali eyizigidi kodwa uMnuz Omarjee akaba khokhelanga ngendlela ayebathembise ngayo wagcina ebalekile ekhaya lakhe,” kusho u-Lieutenant Gwala.
Uqhube wathi kwavulwa icala lokukhwabanisa emaphoyiseni aKwaDukuza nawaseSydenham, kwakhishwa incwadi egunyaza ukuboshwa kuka msolwa.
U-Lieutenant Gwala uthe: “Kusolwa ukuthi ngomhlaka 15 kuMfumfu (October) ngonyaka odlule umsolwa weqa emngceleni waseGolela,” kusho yena.
U-Lieutenant Gwala unxuse amalungu omphakathi angaba nolwazi lokuthi uMnuz Omarjee ukuphi ukuba axhumane nephoyisa eliphenya leli cala u-Lieutenant K.M. Reddy enombolweni ethi 082 458 5630 noma u-Lieutenant Colonel A Rajak enombolweni ethi 031 325 4726 noma ethi 082 458 5570 noma bethinte i-Crime Stop Line enombolweni ethi 08600 10111.